Hong Island | မမွငျရသောခရီးစဉ်ထိုင်း
ထိုနေ့၏အကောင်းဆုံးကာလ : 18.00 သို့ 15.00 နာရီ.
အဲဒီမှာရရှိရန်မည်သို့ : Boats can be boarded at Ao Nang, Mueang District, or Laemsak or Khuan O Boat Landings in Ao Luk District. The trip takes 1 hours respectively. Boats can be hired at 2,500 – 3,500 bahtaday.
Pileh Ko ဟောင်ကောင်
6 အသုံးပြုသူများသည် အွန်လိုင်း